Fakana an-keriny: votsotra i Riaz Hassim, tsy mbola hita i Nassir Sivjee | NewsMada
Fakana an-keriny: votsotra i Riaz Hassim, tsy mbola hita i Nassir Sivjee
Navotsotry ny jiolahy, ny alin’ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 9 ora alina tany, i Riaz Hassim, ilay Karana talen’ny orinasa Makiplast. Tsy nisy nipika ny vaovao momba ny nahavotsotra azy ity. Efa eny anivon’ny fianakaviana izy io vao niely ny vaovao momba ny nahavotsotra azy. Na ny mpitandro filaminana aza, tsy nahalala izany, rehefa nanontaniana. Na ny toerana nanateran’ny jiolahy aza, tsy fantatra.
Mazava ho azy fa nisy tao ny fifanakalozana vola. Ireo jiolahy rahateo, azo heverina fa namepetra ny fianakavian’ity Karana ity tsy hampilaza ny mpitandro filaminana. Anisan’ny mampanano sarotra ny fikarohana ireo jiolahy izany.
Tsy mbola hita kosa i Nassir Sivjee, tale jeneralin’ny Conforma Akoor. Tsy fantatra ny misy azy, na teo aza ny fambazana volabe ho an’izay manam-baovao. Mety ho jiolahy iray ihany ny naka an-keriny ireo Karana roa ireo. Tambajotra iray ihany ny manao ity asa ratsy ity eto amintsika.
Kidnapping fanimbalony hatramin’ny jona
Nahatratra valo ny fakana an-keriny karana hatramin’ny volana jona no ho mankaty.
Ireo Karana nalaina an-keriny: i Rishi Chandarana (3 jona), i Moustapha Hiridjee (11 jona), i Nazir Pirbay (3 jolay), i Sabira Vashram (6 jolay), i Abdoul Aziz Mansour (19 jolay), i Sabir Molou (13 oktobra), i Riaz Hassim (9 novambra) ary i Nassir Sivjee (14 novambra).
Ireo ny Karana efa tany am-pelatan’ny jiolahy. Volabe amina miliara avokoa ny notakin’ny jiolahy tamin’ny fianakavian’ireo. Mahagaga anefa, tsy voafehy ny fakana an-keriny, tsy fantatra hoe mankaiza ny volabe? Tsy azon’ny mpitandro filaminana arahina? Misy ihany ireo tratra, saingy na maty na tsy mahavaly akory izay atidoha mpaniraka sy mety halehan’ny volabe lasan’ireo jiolahy. Aterina amin’ny gony sa alefa amin’ny banky?